Muxuu Yahay Qaloodka Bulshadeenna Haystaa? - WardheerNews
Muxuu Yahay Qaloodka Bulshadeenna Haystaa?
Waayadii ay reer Yurubku ku soo duuleen carriga Soomaalida saskii bilaabmay ilaa iyo maanta waa uu ka dhex jiraa bulshadeenna. Saskaasi waxa uu sababay in oof ma guuraana oo dhanka fekerka ah uu kaga tago bulshada; oo aynnu wax kasta oo cusub oo aan dhalad ahayn ka didno sida xoolaha. Isma ogin; balse saska aynnu ka qabno wax kasta oo cusub waxa uu sababay in aynnu kala garan wayno waxa danteenna ah iyo waxa innagu liddiga ah. Wax inoo san iyo waxa inoo xun. Wax horumarkeennu ku jiro iyo waxa ba’eennu ku jiro.
Hore iyo dhawaanahan ba, waxa Soomaalilaan aad indhaha loogu hayay weerarro isdabajoog ah oo dad Islaamiyiinta la garab ahi ku wadaan xarumo iyo dugsiyo u janjeedha dimuqraadiyadda iyo Galbeedka. Iyaga oo bulshada u bahalagelinaya, ugu na gabbanaya shaadh diineysan oo lamataabtaan ah. Asalka ba hannaanka waxbarasheed ee waddanku ma laha dhex guud oo awood leh; oo xukunta dhammaan dugsiyada iyo dalladaha waxbarasho ee dalka ka jira.
Adigu ba dharaaraad dhoosha ka qoslaysee
In dhibta laysku eegtaa way naga dhexeysee